Hetauda Khabar - हेटौंडाका २ वडाध्यक्षनै कानुन बिपरित पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उर्लिएपछी !
हेटौंडाका २ वडाध्यक्षनै कानुन बिपरित पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उर्लिएपछी !
हेटौंडाका जनताले जिताएका दुईजना वडाअध्यक्षनै कानुन बिपरित राजमार्गमा सवारी पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आज उर्लिएका छन् ।
देशका कुनैपनि राजगमार्गमा सवारी पार्किङ गर्न पाउने कानुनी ब्याबस्था छैन । तर आफु जनताको जनप्रतिनिधि र स्थानिय सरकारको प्रतिनिधि भन्नेकुरानै बिर्सिएर आज हेटौंडाका ब्यापारीको प्रक्षपोषण हुनेगरी अभिब्यक्ति दिएका छन् । हेटौंडाको राजमार्ग क्षेत्रमा नोपार्किङ गर्ने सबै जिम्मा प्रशाशनलाई दिने भनेर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा सहि गरेका हेटौंडा ५ का वडाअध्यक्ष राजेश बानियाँ र हेटौंडा १४ का वडाअध्यक्ष दिपक खड्काले ब्यबसायीको प्रक्षपोण हुनेगरी ब्याबसायीहरुको आन्दोलनमा सहभागि भए ।
उनिहरु दुबै जनाले आफैले सहि गरेको निणय मान्दैनौ राजमार्गमा पार्किङ गर्नै पाउनुपर्छ भन्दै हास्यासपद अभिब्यक्ति दिएका थिए । नोपार्किङका बिरुद्धमा मकवानपुर उद्योग बाणिज्यसंघको नेतृत्वमा आन्दोलनका कार्यक्रमका बिषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलिसंगै सहिमा सहि लगाउँदै आफ्नै निणय बिरुद्धमा कानुन बिपरित राजमार्गमा मोटरसाईकल रोक्न पाउनुपर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतसंग माग गरिरहेका थिए ।
वडा अध्यक्षहरुले उपमहानगरपालिकाले कुनैपनि निणय गर्दा आफ्नो कार्यपालिकाको बैठकमा कुरा उठाउन पािईन्छ । फेरी पनि उपमहानगरपालिकाको भोलीको कार्यपालिका बैठक पनि राखिएको छ । त्यो बैठकमा पनि आफ्ना स्वतत्त्र अभिब्यक्ति राख्नपाउने ब्याबस्था छ । तर जनताको करबाट तलब खाने, उपमहानगरपालिकामा आफै निणय गरेर सही गर्ने र त्यही निणय मान्दैनौ भनेर ब्यापारीलाई उक्साएकोमा हेटौंडाका वासिन्दाहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
हेटौडाको बजार क्षेत्रको राजमार्गमा सवारी पार्किङ हटाउने बिषयमा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशाशन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको निणयपछी कार्यनयनमा ल्याइएको हो ।